ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များဥယျာဉ်စောင့်ကိုထုတ်ပစ် | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 26 နိုဝင်ဘာလ, 2013 အားဖြင့် Holmbygden.se
ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များမစ်ရှင်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာအစီရင်ခံစာများအဘို့အဥယျာဉ်စောင့်အဆုံးသတ်. Östersundspostenများ၏ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းခေါ်ဆိုမှုမှကုမ္ပဏီ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်လိုသည်.
ထစွမ်းအင်လက်မှတ်နောက်ဆုံးနွေဦးကိုအခြားသူများအကြား, ခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းများအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုမှ၎င်း၏နူးညံ့စေလွှတ်သောအခါ. တစ်ဦး. Uppsala အပြင်ဘက် Holmes Tobo ပြီးသားလူတွေနေထိုင်နေကြကြောင်းတိုက်ခန်းများနှင့်အတူထိုသို့ပြုကြသည်. နွေရာသီကာလအတွင်းကွဲပြားခြားနား Holmes အတွက်ဥယျာဉ်စောင့်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့. အခုတော့ Tobo အတွက်တူညီတဲ့ချပြုပါရန်ကြိုးစား, ဥယျာဉ်စောင့်စာချုပ်များနှင့်ဆက်လက်တည်ရှိခွင့်ရှိသည်ပေမယ့်.
နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့တာဝန်တွေကိုထ Energideklarationers အိမ်ယာအတွက် Tobo အလွန်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ဥယျာဉ်စောင့်များ၏အခြေအနေအပေါ်အစီရင်ခံစာပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်. မိုက်ကယ် Sterner ကုမ္ပဏီသူတို့တစ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုစတင်ရန်နှင့်အမှားအယွင်းများရန်အလို့ငှာဆောင်ကြဉ်းသင့်ကြောင်းအဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ကပြောပါတယ်. တစ်ဦးကောင်းပေးတဲ့ dialog ဆန့်ကျင်ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များယခုအစား Tobo အတွက်ဥယျာဉ်စောင့်ကိုထုတ်ပစ်ချင်သည်ဟု Arbetarbladet သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်. ဥယျာဉ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနေထိုင်သူများ '' ဘက်မှာယခုရပ်တည်.
သူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်စောင့်ပစ် ချ. ၏ဖြစ်စဉ်ကို Holmes ကနေအသိအမှတ်ပြု. ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များအများစုပိုင်ရှင်ပင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Holmes ၌သူ၏အသက်အကြီးဆုံးအိမ်ငှားထုတ်ပစ်သောသူ Marcus Hamberg. သူမမြှို့နယ်အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်အစဉ်အဆက်ကတည်းကအဲဒီမှာနထေိုငျခဲ့ပေမယ့်, သူမ Holmes ရှိသူ၏နေအိမ်စွန့်ခွာဖို့ Marus Hambergs ကုမ္ပဏီများမှ Fagerhyltan အားဖြင့်အတင်းအကျပ်ခဲ့သည်. ကိုယ့်အတွက် 20 ရက်ပေါင်းသူမကသွားပြီမည်ဖြစ်ကြောင်း.
- ငါ Holmes အားလုံးကိုငါ့အသက်ကိုနေထိုင်ခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရွှေ့ချင်ကြဘူး, လို့သူကပြောပါတယ်.
20/4 2012 ST: Nu töms husen i Holm ပြင်သို့ပစ် လိုက်. သူအိမ်ငှားအကြောင်းပိုမို Read.
Östersundspostenလည်းမနေ့ကအများအပြားဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့သည် ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များနှင့်အခြားကုမ္ပဏီ၏, Firma လက်ဖက်ရည်Widéen. အိမ်နီးချင်းခရိုင်ထဲမှာအများအပြားနေရာများမှာကုမ္ပဏီနှစ်ခုခိုလှုံခွင့်တည်းခိုနေထိုင်လေလံရှာသောအခါ. အဆိုပါအကြမ်းဖျင်းအဆိုအရကုမ္ပဏီများသည်ငှားရမ်းခွင့်နှင့်၎င်းတို့၏ခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏အကျင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးကင်းမဲ့, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဆှီဒငျရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြောင်းရေးထားပြီသော်လည်း.
ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့တောင်းဆို RIP အကြံပေးနိုင်သောအခွင့် Kent Juhlénအလုပ်လုပ်တယ်သူကထူးဆန်းတဲ့မတှေ့နိုငျပါလျှင်တောင်း. – “ပြီးပြီ, ငါထင်. ဒါဟာဤကိစ္စတွင်အတွက်မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါသည်”, သူကပြန်ပြော. Kent Juhlénရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကုမ္ပဏီများမှစုံစမ်းစစ်ဆေးကပြောပါတယ်.
RIP ကိုလည်းလက်ဖက်ရည်Widéenထမြည်, ထိုအခါမူကား Bracke ကနေမယ့်အစားလက်ဖက်ရည်သမီးပီ Karlsson တုံ့ပြန်. တယ်လီဖုန်း Bracke နှင့်အတူတစ်ဦးကပီ Karlsson လည်းထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များများအတွက်အဆက်အသွယ်လူတစ်ဦးသည်နှင့် Bracke တစ်ဦးတည်းသာပီ Karlsson ဖြစ်ပါသည်.
ကပီ Karlsson ထ Energideklarationers နူးညံ့သောသူသည်သူမပါလျှင် RIP ကိုမေး.
- အမှတ်, ဒါကြောင့်ငါ့ကိုမင့်, ပီကိုက်ညီ.
- ငါမဖြေနိုင်, ငါထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးနှငျ့သငျအကြောင်းပြောနေတာဖွင့်အဘယျသို့နားမလညျ, ပီ Karlsson ပြောပါတယ်.
ပီ Karlsson ဟောင်းပိုင်ရှင် “Skandalhusen” Holmes Johan အတွက် Stendahl မရတဲ့ VAT နှင့်လုပ်ခလစာအခွန်အပါအဝင်တစ်အရှုပ်တော်ပုံအားဖြင့်ပိတ်ပစ်တယ်ကြောင့်Hälsinglandအတွက်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းမပြုမီအတူတကွရှိခဲ့တယ်.
25/11 အစအနများ: Migrationsverket utreder företagen
25/11 အစအနများ: Här vill de starta flyktingboende
25/11 အစအနများ: Flera turer kring asylboenden i Bräcke och Strömsund
25/11 အစအနများ: Vill starta asylboenden – men saknar avtal
20/11 SR P4 Uppland: Skolvägenမှာနေရာထိုင်ခင်း “သင့်အနေဖြင့်အိမ်ခြေကပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းမျောစွန့်ခွာ” အဆိုပါတိုက်ခန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေဒီယိုအစီရင်ခံစာများကိုနားထောင်သောကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုရှင်းပြခဲ့.
20/11 အိမ်ခြံမြေသတင်းများ: Uppdrag Granskning i Tierp